घर बसे भोकमरी , बाहिर गए माहामारी ! - Chhuteka Kura
Chhuteka Kura प्रकाशित मिती : १३ बैशाख २०७८, सोमबार १०:४७
मेरो आमालाई अस्पतालले लिएन ! अस्पतालमा न त अक्सिजन छ न बेड नै ! यस्तो अवस्थामा म कसलाई गुहारौं ?
यो मैले एक भिडियोमा सुनेको र देखेको दृश्य हो । हाम्राे छिमेकी भारतमा माहामारीले हाहाकार मच्चाएको छ । एकातिर मान्छेको उपचार भै रहेको छ भने अर्को तिर मान्छेको दाहसंस्कार चलिरहेको छ । याे कारूणिक अवस्था देख्दा जसकाे मन पनि पग्लिन्छ । तर याे अवस्था हामीबाट पनि धेरै टाढा भने छैन् ।
कोरानाबाट मुक्त भयौं भन्ने भारत आज आफैं संकटमा ! तीन लाख बत्तिस हजार केश एकै दिनमा । निकै भयंकर बन्दै गएको कोराना आज नियन्त्रणबाट बाहिर छ । संसारलाई नै सबै भन्दा बढी खोप बितरण गर्ने भारत आज आफैं खोप बिहिन , औषधि बिहिन , अक्सिजन बिहिन र अस्पतालमा बेड बिहिन बनेको छ । भारतले त्यत्रो जनसंख्या मध्ये केवल १%भन्दा बढीलाइ खाेप बितरण गर्न सकेकाे छैन् । यस्ता समचार यत्रतत्र देखिन्छन ।
सोच्नुहोस् त , अब के होला भारतको हालत ?
त्यसो त भारतकै लापरबाहिले याे गति भएको हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । कोरानाको डर हुँदा हुँदै आखिर किन गरे चुनाव ? किन गरे बिशाल आमसभा र जुलुश ? किन गरे त्यत्रो झुन्डमा कुम्भ मेला ?
सावधानी नअपनाए यसले उठिबास लगाँउछ भन्ने कुरा सबैलाइ थाहै छ । थाहा भए पनि व्यवहारमा सतर्कता देखिदैन । जसकारण आज यो दुर्गती हुन पुगेको छ । अझै के के हुने हाे भनेर कल्पना गर्नै गाह्राे छ ।
भारतकाे दयनिय अवस्था सुन्दा मेरि हजुरआमा भन्नूहुन्छ – म त्यसै त कमजाेर भैसकेकाे छु । कसरी लड्न सक्नु याे भाइरससँग ? कहिल्यै नदेखेकाे कुरा भाेग्नुपर्याे । मलाई त डरमात्रै लागेकाे छ ।
हजुरआमा मात्रै हैन, मेरो भाइको मस्तिष्कमा पनि यसकाे असर देखिन थालेकाे छ ।
कोराना (कोभिड-१९)को पहिलाे लहर बाट बाचेकाे अनुभुती गर्न पनि नपाइ फेरि अर्को नयाँ र डरलाग्दो भेरिएन्ट सृजना हुँदा मेरो मामुको मानशिकतामा चिन्ताजनक कुराहरु खेली रहेको छ । कतै म तल माथी परे भने घरको हाल के होला ? भनेर अनेकौं प्रश्न मेरो मामुको मन भित्र उकुस मुकुस भएर गुम्सिएका छन् ।
त्यस्तै मेरो बुवाको मनमा पनि त्यतिकै चिन्ता छ । घर बसे भोकमरी , बाहिर गए माहामारी ! कमाउने बाटो नै नभएपछि आफू कसरी बाच्ने ? र, कसरी पाल्ने परिवार ?
निकै कठिन परिस्थितिमा हामी गुज्रिएका छौं । यो समस्या यो एक परिवारको मात्रै हैन । देशको समस्या पनि हो । समग्र बिश्वको समस्या हो ! हामीले पछिल्लो लकडाउन अर्थात् निषेधाज्ञाबाट धेरै पाठ सिक्न सक्छौ । अस्तब्यस्त, लथालिङ्ग भएको मान्छेकाे जीवन यीनै आँखाले प्रत्यक्ष देखेका छन् । फेरि यस्तो दुःख देख्न नपरोस् भनेर भगवानसंग लाख प्रार्थना गरि रहेका छाै । प्राथानाले नियन्त्रण नहुने कुरा पनि प्रष्टै भइसकेकाे छ ।
जे हाेस यत्रतत्र काेराेनानै “टल्क अफ दि टाउन “ बनेको छ !
हामी भन्दा सुखी सम्पन्न राष्ट्र भारत आज गुहार माग्दैछ । झन हाम्रो हालत के होला ? बेलैमा सोचौं । नत्र भने त हाम्रोमा लास गाड्ने ठाउँ नै हुँदैन । उपचार दिने डाक्टर हुदैनन् ! म त सोच्न पनि सक्दिनँ ।
कोरानाले धनी र गरिब छुट्टाउदैन । नत्र त नेपालका राजा भइसकेकाे मान्छेलाई कसरी लाग्थ्याे ?
जस्ले लापरबाही गर्छ , त्यसलाई लाग्छ कोराना । याे कुरा प्रष्ट छ ।
यो जटिल अवस्था नियन्त्रणाका लागि हामी सबैकाे भूमिका रहन्छ । त्याे भन्दा धेरै राज्यको भुमिका रहन्छ । सरकार हाम्रो राष्ट्रको अभिभावक हो । जनताकाे सुरक्षा उसकाे कर्तव्य हो । याे कर्तव्य पालन भएकाे तपाइले अनुभुति गर्न पाउनु भएकाे छ ?
अनि आफैले पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको जस्तो लाग्दैछ ? कि छैन ? एउटाले मात्रै गरेर याे समस्या समाधान हुने छाटकाट छैन । एउटाकाे गल्तीकाे सजाय सबैले भाेग्नुपर्ने भएकाले पनि एक आपसमा दोष नदिइ याे माहामारीलाइर् तह लगाउनै पर्नेछ ।
समस्यामा परेकालाइ सकेजती सहयाेग गराैं आफू पनि बाचाैं अरुलाई पनि बचाऔं।
सरकारको निद्रेशन पूर्ण रुपले पालना गरौँ,
कोरानाबाट आफ्नो अनि सबैको ज्यान जोगाऔं।।
कथा– पूर्णता (पर्फेक्सन) १३ बैशाख २०७८, सोमबार १०:४७
प्रकाशन अघि नै भाइरल बनेको डियर एक्स बजारमा आउँदै १३ बैशाख २०७८, सोमबार १०:४७
मृत्युशैयाबाट… १३ बैशाख २०७८, सोमबार १०:४७
घर बसे भोकमरी , बाहिर गए माहामारी ! १३ बैशाख २०७८, सोमबार १०:४७
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको रिजल्ट यसरी हेर्नुस । १३ बैशाख २०७८, सोमबार १०:४७